Tabataba be ao Zimbaboe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2018 4:09 GMT
Maro ny adihevitra tao Zimbabwe nandritra ny herinandro lasa. Resabe tsy misy dikany, izany no misy. Ny fivoarana lehibe indrindra amin'ny vaovao navoakan'ny firenena dia i Gideon Gono, governora mampiadihevitra ao amin'ny banky foiben'i Zimbabwe izay namoaka fanambarana ara-bola efa nandrasana mafy tamin'ny herinandro lasa teo. Mampalahelo fa tahaka ny zava-drehetra hafa eto amin'ny firenena, ny tsaho niely manodidina ny governora no resabe voalohany tamin'ny herinandro lasa teo raha namoaka ilay fanambarana i Gono. Voampanga ho miditra an-tsokosoko tamin'ny gazety, sy mikendry ireo mpandraharahan'ny banky tompotany no sady manangana sy miaro ny lovany mampametram-panontaniana i Gono, izay efa voampanga hatry ny ela tamin'ny fitsabahana amin'ny raharaha tsy ara-bola.
Zimpundit mandinika ilay fanambarana ara-politika toy izao:
Raha ny marina, ao anatin'ny toe-javatra mampalahelo ny toe-draharaha ao Zimbaboe avy amin'ny fomba fijerin'i Sokwanele,